Iingxangxasi yi-TLC - Izinto Zobugcisa
'Ukuleqa iingxangxasi' yindlela ye-TLC yokuchaza indlela abantu abasukela ngayo amaphupha angabonakaliyo bengacingi ngeziphumo. Ivesi yokuqala ithetha malunga nolwalamano lwangaphakathi lomama nonyana. Uleqa 'iingxangxasi' (imali nembeko ngokuthengisa iziyobisi), kodwa umama wakhe uyazi ukuba ayinakuphela kakuhle. Ivesi lesibini lijongana nobudlelwane bendoda nomfazi. 'Ingxangxasi' yakhe kukulala nomntu ongathandani naye - 'unomdla wemvelo wokuhendwa.' Oku kunokuthetha ukuba uqhatha umntu okanye umfazi abonayo ukuba ukhohlisa umntu. Nokuba yeyiphi indlela, ungena kwi-HIV kwaye uyafa ('iileta ezintathu zamsa kwindawo yakhe yokuphumla'). I-TLC yayinkulu ekwaziseni ngoGawulayo- Iliso lasekhohlo lalihlala linxiba iikhondom ezixhonywe kwimpahla yakhe nakwiiglasi zakhe ukukhuthaza isondo elikhuselekileyo.
UCee-Lo Green ucule ugcino kule nto. Uyaziwa njengombhali wengoma kunye nomvelisi, kwaye njengelungu likaGoodie Mob kunye noGnarls Barkley. UCee-Lo ukhumbula ukuba UMgcini Iphepha-ndaba lika-Matshi 22, 2008: 'bendisebenza kwistudiyo esinye kwaye ndiyazi ukuba namantombazana, kuba besikwilebheli enye, ke bandibuze nje. Khange ndiyiqonde ngelo xesha ukuba yeyiphi ingoma enkulu eza kuba yiyo.
Iqela lemveliso yaseAtlanta eliLungelelanisiweyo uNoize, ovelise ingoma, wabhala le ngoma noMarqueze Etheridge, kunye neLLC 'uLiso lasekhohlo' leLopes zeTLC zeza ne-rap. I-Lopes yayijongana neengxaki ezithile ngelo xesha, ezichazwe kwi-rap yakhe. Wayenolwalamano olungaqhelekanga kunye nomdlali webhola u-Andre Rison, kwaye nge-9 kaJuni 1994 watshisa izihlangu zakhe ebhafini yakhe, eyatshisa indlu yakhe yonke eyi-2 yezigidi. Wathembisa ityala lokutshisa, kodwa waxolelana noRison.
Jeana - Iindawo eziphakamileyo zeSterling, MI
I-TLC yasayinwa kwiRekodi yeLaFace, eyinxalenye yeArista eyayikhokelwa ngumchongi owaziwayo uClive Davis. Kodwa ngokuka-T-Boz, akayithandanga le ngoma. Kuthathe ukutyhala kumcebisi wabo kwileyibhile, u-LA Reid, ukufumana unyuselo lwengoma kunye nohlahlo-lwabiwo mali lwevidiyo.
UT-Boz ukhumbule ukuba Q iphephancwadi indlela abamtyhala ngayo uDavis ukuba akhulule enye. Sibhale ipowusta enkulu enophawu - 'Nceda ukholelwe kuthi' - sayithumela eofisini yakhe. ' Uye wema kancinci. 'Yeyona ngoma inkulu ukuza kuthi ga ngoku.'
Ividiyo yaphumelela i-MTV Video Music Award yeVidiyo yoNyaka ngo-1995, ibetha u-'Buddy Holly 'ngu-Weezer kunye' Ityala lebhasikithi 'ngoSuku oluGreen. Iklip ye 'Waterfalls' inezinto ezininzi ezintle ezenziwe yikhompyuter, kubandakanya amanzi amaninzi, awayedume ngokuba nzima ukuwanika. Yayikhokelwe ngu-F. Gary Grey, owayenomboniso bhanyabhanya wokuqala, uLwesihlanu , wakhululwa kunyaka olandelayo. Waqhubeka wayalela I-Outta Compton ethe ngqo kwaye Ikamva Lomsindo . Ividiyo ikwathathe ii-VMAs zoKhetho loMjongi, iVidiyo yeQela eliPhambili kunye neVidiyo yeR & B eNgcono.
Iziphumo ezizodwa kwividiyo zenziwe yinkampani yoyilo ebonakalayo yeHomer & Associates, eyayisebenzisa iteknoloji yokubamba intshukumo ukwenza imifanekiso. Inkampani isebenzise ubuchule obufanayo emsebenzini wabo wangaphambili kwividiyo kaPeter Gabriel ye 'Steam' nakwimuvi Umntu weLawnmower .
Iingoma zomculo we-rap zikaLisa 'weLiso lasekhohlo' Iilophu ezenziwa kule ngoma zazifakwe kwibhokisi yakhe. I-Lopes isweleke kwingozi yemoto eHonduras ngo-2002.
Iqela lentombazana laseBritane elinamaqhekeza amathathu uStooshe likhuphe isiciko sale ngoma kwisithathu sabo esingatshatanga kwi-albhamu yabo enegama lokuqala ngo-2012. U-Rumbold we-trio uxelele Ilanga . 'Kukudibana kwamagorha anjeya asikhuthazayo, kwaye sinabona bantu bathembekileyo kubalandeli.'
Inguqulelo yabo yavela kwi # 21 e-UK itshati yetshathi. UStooshe ukwazile ukufumana ii-cameo ezivela kwi-TLC Bo-Chz kunye neChilli yevidiyo yabo ehamba nomculo.
U-T-Boz kunye no Chilli baphinde bayirekhoda ingoma kunye ne-popstar yase-Japan u-Namie Amuro ukuphawula iminyaka yabo ye-20. Inguqulelo entsha yomkhondo yanikezelwa kubalandeli babo eJapan kwaye wafumanisa ukuba uNamie ucaphula ivesi yeLekhohlo ngasekunene ngokusebeza.
Oku kwenza ukuba 'iingoma ezixoxwe kuluhlu lweemovie' ngenxa yokusetyenziswa kwayo kwifilimu ka-2010 Abanye abafana , apho umlingiswa kaMichael Keaton egcina ngokungazi ecaphula iingoma ze-TLC, eqala ngale.
UMeshell Ndegeocello wayigubungela le ngoma ngo-2018, ekhupha ividiyo yayo Wadubula e-Iceland kwaye wakhokelwa nguDamani Baker.
Oku kusetyenziswa kwimiboniso bhanyabhanya UCaptain Marvel (2019), SingabakaMiller (2013) kunye Amaqabane abuyela umva (2009).
Ukuba uyazibuza ukuba kuvakala njani xa umntu ecula le ngoma, jonga ikhava ka-Death Cab yeCutie, oyikhuphile ngo-2020 IGeorgia EP , Isibonelelo sombutho weSenzo sika-Stacey Abrams. Zonke izembozo kwi-EP ziingoma zeengcali ezivela eGeorgia, kwilizwe lika-Abrams.
yintoni uthando olunento yokwenza nentsingiselo
Ndisaziva oko ukusukela ngo-1966
mna nawe mntwana asinazi kodwa izilwanyana ezanyisayo
Ngaba uziva ngathi ndiyazenza iingoma
Ngamaxesha athile ndiziva ndibalekile
ndihlise apho kukho ingca eluhlaza